Gandaki Sanchar » जापान : सवैको साथी मनकामना रेस्टुरेण्ट
जापान : सवैको साथी मनकामना रेस्टुरेण्ट
नेपाली आवाज, जापान । तपाई जापानमा हुनुहुन्छ ? कि जापान जाँदै हुनुहुन्छ ? अर्थात जापानमा कोठा नपाएर वा सजावटका सामग्री नपाएर समस्यामा हुनुहुन्छ भने अव चिन्ता गर्नु पदैन । नेपालीहरुको समस्यालाई मध्येनजर गदै जापानमा संचालनरत छ मनकामना रेष्टुरेण्ट । रोजगारीको शिलशिलामा ११ बर्ष अगडी अध्ययनको शिलशिलामा जापान पुगेका पोखरा रत्नचोकका नबिन अधिकारीले उक्त रेष्टुरेण्ट संचालनमा ल्याएका हुन् ।
जापानको फुकोवाक हाकता ताकेसिता 2-4-1 मा संचालनरत उक्त रेष्टुरेण्ट अहिले निकै चर्चित छ । नेपाली पनलाई मध्येनजर गदै संचालनमा आएको उक्त रेस्टुरेण्टले नेपालीको मात्र होईन विदेशीको पनि मन जितेको छ । शुरुवाती दिनमा जापानमा निकै समस्या भोगेका अधिकारीले नयाँ पिढिले समस्या नभोगोस् भनेर उक्त रेस्टुरेण्ट संचालनमा ल्याएको उनको भनाई छ ।
‘विगतमा मैले पनि जापानमा निकै समस्या भोगे, कोठा नपाईने, कोठामा राख्ने सामग्री नपाईने, यस्ता थुप्रै समस्यालाई मध्येनजर गदै सेवा भावले उक्त रेस्टुडेण्ट संचालनमा ल्याएको उनको भनाई छ ।’ उनले रेस्टुडेण्ट मार्फत धेरै नेपालीहरुलाई सहयोग गदै आएका छन् । ‘रेस्टुरेण्ट पेशा व्यवसाय भएपनि मैले त्यो रुपमा हेरेको छैन उनले भने,‘यसको माध्यमवाट धेरै नेपालीलाई सहयोग गरेको छु ।’ दुःखमा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द आउने उनको भनाई छ ।
उनको रेस्टुरेण्टमा यति मात्र सेवा सुविधा छैनन् नेपाली स्वादमा विभिन्न खानाका परिकार समेत पाईन्छ । नेपाली खानाको परिकारलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउने उद्देश्यले उनले जापानमा नेपाली स्वादको परिकार सहितको रेस्टुरेण्ट संचालनमा ल्याएका दावी गर्छन । उनको रेस्टुरेण्टमा नेपाली स्वादमा खाना सेट सहित सुकुटी, मम चाउमिन लगायत इण्डियान, जापानिज सहित ग्रहकको इच्छा अनुसार विभिन्न स्वादमा खानाका परिकार पाईन्छ । साथै खाद्यान्नका सामग्री पाईनुका साथै आवश्यक सामग्री पाईन्छ । बालबालिकाहरुका लागि मामा घर, युवाहरुका लागि रोजगारी, बृद्धहरुका लागि बैशाखीको रुपमा सेवा गदै आएको रेस्टुरेण्टको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १५:३७